Dad isku qoys ah oo la sheegay in ay ku dhinteen qaraxii Muqdisho
Townsend wraps up East Africa trip after US troops exit from Somalia
Posted On 25-03-2020, 04:05PM
MUQDISHO, Soomaaliya – Fahfaahino dheeri ah ayaa waxay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay qaraxii Arbacada maanta ah ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Ugu yaraan saddex ruux ayaa illaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyootay falkaas, halka tirro intaas ka badan uu kasoo yeeray dhaawac.
Saalax Carab, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo si kooban uga hadlay dhacdada, ayaa xusay in dadka dhintay ay kasoo jeedaan hal qoys.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee xiriirka bulshada ee Facebook ayuu ku shaaciyey in shaqsiyaadkaas ay dhinteen markii Isbitaalka la geeyay.
Sidda laga soo xigtay Mr Carab, weerarka wuxuu ahaa is-miidaamin uu fuliyey naftii halige la tuhunsan yahay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab.
"Ruux naftii halige ah ayaa isku qarxiyay agagaarka Baar-Bulsho ee Degmada Howlwadaag. gaar ahaan suuq yaraha Sayidka. Waxaa ku dhaawacmay 6 ruux oo 4 ka mid ah ay yihiin 1 Qoys, Inkastoo markii danbe ay Isbitaalka ku geeriyoodeen 3 ka mid ah qoyskii. Allaha u naxriisto," ayuu yiri, isagoo tacsi u diray ehelada ay ka baxeen dhamaan marxuumiinta.
Dadweynaha ayuu ku tartarsiiyey in ay gacan ka geystaan xaqiijinta xasiloonida caasimadda isla markaana ay kala shaqeeyaan laamaha ammaanka siddii loosoo qabqaban lahaa dambiileyaasha.
Qaraxaan ayaa yimid iyaddoo maalmo kahor Al-Shabaab ay burburisay qaar kamid ah Kaamirooyinka qarsoon ee waddooyinka Muqdisho, kuwaas oo gacan ka geystay in ay hoos u dhacaan falalkaas.